Onye na - agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba egwu egwu egwu egwu - Dịrị
Ọzụzụ Nkịta, Gosipụtara
Onye na - agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba egwu egwu egwu egwu
Golden Cocker Retriever bụ ihe zuru oke, ihe niile maka ezinụlọ nkịta .
Nke a na-ahụ n'anya ma na-egwu egwu crossbreed, na-esite na ngwakọta nke Golden Retriever na Cocker Spaniel, bụ ezigbo enyi nwere oke iwe nwere ọtụtụ ịhụnanya iji nye.
Dika ha bu ndi ozo, ndi Cocker Spaniels nwekwara otutu agba agba di iche iche, a na-akpọ ha mgbe ụfọdụ dị ka nwa nkịta dị omimi, ebe ọ bụ na ndị na-azụ ihe agaghị enwe ike ịma ihe ha ga - adị ruo mgbe ha tozuru oke.
Ihe omimi a na agbakwunye na ihe uto na nkpuru nke Golden Retriever Cocker Spaniel Mix nwere.
Ka anyị nwere a lee anya na ihe ha nwere ike ịdị ka, ha ahụkarị temperament na otú dị mfe ọ bụ na-elekọta a maa mma ruo mgbe ebighị ebi nwa nkita.
Golden Cocker Retrievers na-asọpụrụ mmekọrịta mmadụ na egwuregwu!
Golden Cocker Retriever Ama
Nha 14-24 sentimita asatọ n'ịdị elu
Ibu ibu 30-60 pound (maka ụmụ nwoke na nwanyị)
Afọ ndụ 11-14 afọ
Reeddị Bdị Ngwakọta na More
Nzube Ezinụlọ / Ibe Ibe
Adabara Ezinụlọ Ndị nwere Youngmụntakịrị, Ndị Di na Nwunye, Ndị Nwe Novice
Agba dị iche iche Golden, Yellow, Brown, Mgbe ụfọdụ Merles Na Black
Iwe Enyi na enyi, ọgụgụ isi, na-elekọta mmadụ, nọ n'ọrụ ma na-achọ ime ihe na-amasị
Aha ndị ọzọ Golden Retriever x Cocker Spaniel Ngwakọta
Ọdịnaya na Ndenye Navigation
Kedu ihe bụ Golden Cocker Retriever?
Ikike Mmalite Of The Golden Cocker Retriever
Golden Cocker Retriever nwa nkita
Ọnọdụ Golden Cocker Retriever
Nkịta ndị a
Ndi Ezigbo Nkịta Ezinaụlọ A Bụ?
Ilekọta A Golden Retriever Cocker Spaniel Mix
Ihe oriri na ihe oriri
Na-emega A Cocker Spaniel Golden Retriever Mix
Zụzi Cocker Spaniel Golden Retriever
Golden Cocker Retriever Size, Ọdịdị, Uwe na ejiji
Nduzi nke eji ejiji
Onye na-agba ọlaedo na-acha uhie uhie bụ obe n'etiti ihe ịchọ mma ọla edo na spaniel
Obebisi abụọ n'ime ụdị nkịta kachasị ewu ewu ke ererimbot ama ada ahụrụ n'anya ezinụlọ zuru oke .
A Golden Cocker Retriever zuru toro, na-adịkarị ntakịrị karịa onye Golden Retriever.
Ha bu nkita enyi na enyi dika ndi okenye, ndi ala ozo na umuaka.
Dika ha bu ndi ozo, ndi America kennel amataghi ha, mana ndi American Canine Hybrid Club choputara ha.
Ma ndị Golden Retrievers na Cocker Spaniel so na ndị otu nkịta egwuregwu , na-arụ ọrụ nke na-arụsi ọrụ ike na ọgụgụ isi.
N'agbanyeghị akụkọ ihe mere eme nke ndị enyi na-achụ nta na ụdị nne na nna, ngwakọta a dabara adaba dị ka anụ ụlọ ezinụlọ n'ihi iguzosi ike n'ihe na ọbụbụenyi ha.
Na-enwe mmega ahụ (ọkachasị igwu mmiri) ma na-arụsi ọrụ ike n'èzí, obe a na-eto nke ọma site na egwuregwu mmadụ na mmekọrịta ya na ị na-agagharị oghere ọhụụ.
Iji chọpụta ihe kpatara obe a ji dị mma na ndị nwe oge mbụ, ka anyị buru ụzọ nyochaa ihe ha ketara site na ụdị nne na nna ha.
Ntughari ọla edo
Golden Retrievers sitere na Scotland ebe ha bịara bụrụ ụdị dị iche iche nke nkịta egbe eji weghachite egwuregwu nke ahụ a gbagburu n'ala na mmiri.
Emere nke a site na ịzụlite Flat Coated Retriever na Tweed Water Spaniel maka ezigbo ịchụ nta ịchụ nta.
Ewepụghị ntekwasa Retrievers ndị omenala nwa, ma recess reene site n'oge ruo n'oge mepụta otu odo nke bụ ihe mbụ bred na Spaniel Water iji mepụta Golden Retriever.
Ntoputa nke Cocker Spaniels na US nwere ike weghachite na narị afọ nke 17 na ọdịda nke Mayflower dị ka otu n'ime nkịta abụọ ahụ dị n'ime ụgbọ mmiri bụ n'ezie onye Spaniel.
Ndebanye aha mbụ na 1879 bụ ewu ewu nke Cocker Spaniel toro nke ukwuu n'oge 1930s na 1940.
Bekee ma ọ bụ Spanish Spaniels nwere ike ịbụ sire ma ọ bụ dam na ụdị obe a; a na-eme ka mgbanwe na ọdịdị nke ọtụtụ Golden Cocker Retrievers.
American Cockers, nke a maara na US dị ka Cocker Spaniels, nwere ike ịnwe anụ karịa ndị ibe England ma bụrụ ndị nkịta na-anọkarị.
Enweghị mmuta ịchụ nta na-eme ka ha dabara adaba maka anụ ụlọ, ọ bụ ezie na ha ka na-arụsi ọrụ ike.
Golden Cocker Eweghachiri
Anaghị edekọ akụkọ agbụrụ na mmalite nke nkịta a.
A na-eche, ụdị ọhụụ ọhụrụ a nwere ike ịbụ nsonazụ nke onye mmebe nkịta na-eme ihe n'oge 1990s na 2000s, ọ bụ ezie na nke a kachasị dabere na nchọpụta nke ụdị nkịta ndị a ma ama n'oge a.
N'agbanyeghị agbụrụ ha, nkịta a bụ ngwakọ nke ụdị arụ ọrụ abụọ, nke nwere ọgụgụ isi na nke enyi, na-eme ka ha zuo oke dị ka nkịta ezinụlọ!
A makwara ụmụ nkịta Golden Cocker Retriever puppy puppy.
Maka nkịta a, ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na Spaniel ma ọ bụ Retriever bụ ụda ma ọ bụ mgbochi mmiri, nke a bụ n'ihi na ụdị nkịta abụọ ahụ nwere otu nha.
A Golden Cocker Retriever price tag nwere ike ịdị site na $ 800 USD na $ 2,000 USD.
Sizesdị mkpofu litter na-adaberekarị na nke nne. Iwu izugbe bụ nkịta buru ibu ka ibu ahụ buru ibu . Nwere ike ịtụ anya ebe ọ bụla n'etiti puppy 4 na 12 kwa.
A maara nkịta a dị ka 'nwa nkịta na-adịru mgbe ebighị ebi' dịka a na-ekwu na ha na-echekwa ụdị nwa nkita. N'ikwu nke a, ọ bụ ụdị obe na ndị nwe ya kwesịrị iburu n'uche na ọdịdị nwere ike ịdị iche iche.
N'ịbụ a crossbreed, ọ nwere ike isi ike iji chọpụta na-atụ anya nha n'oge dị iche iche nke mmepe ha :
Ndị Spain n'ozuzu ha na-eto na ọnwa 18-24
Ndị na - ewepụta ihe tozuru oke na ọnwa 24
Ya mere, anyị kwesịrị ịtụ anya na ntozu oke anụ ahụ ga-adị n'etiti ọnwa 18 na 24, ọ bụ ezie na ntozu oke uche nwere ike were afọ atọ.
Dabere na nha nke nne na nna ha, ị nwere ike ịtụ anya nwa nkịta dị izu asaa ka ọ tụọ ebe ọ bụla n'etiti 6 na 9 pound.
Chart Golden Cocker Retriever Growth Chart Dabere na Ibu Ndị Nne na Nna:
Ibu ibu na Pound (Min-Max Range)
Ọnwa 3 10 25
Ọnwa isii iri abụọ iri ise
Ọnwa 9 25 60
Ọnwa iri na abụọ 30 70
Enyi na enyi
Mfe nke Nlekọta
Nlekọta mmega ahụ
N'ịhụnanya ma na-eguzosi ike n'ihe, nkịta ndị a bụ ezigbo ndị enyi , nwere amamihe ebumpụta ụwa nke ịchụ na iweta.
Ngwongwo egwuregwu nke Golden Cocker Retriever na-ezo aka na nkịta siri ike ma na-egwuri egwu bụ ndị na-achọ ịchọta n'èzí.
Ha abụọ nwere mmekọrịta enyi na enyi ma na-emekọrịta ihe ọ bụla soro di na nwunye gwurie egwu na nkịta ndị ọzọ, ebe ha dị jụụ ma dịkwa nwayọ mgbe ha na ụmụaka nọ.
Agbanyeghị, iguzosi ike n'ihe ha pụtakwara na ụdị a na-etolite mgbakwunye siri ike nye ndị nwe ha na ndị otu ezinụlọ ya mere anaghị anagide nke ọma ịhapụ naanị gị ogologo oge.
Bredị a adịghị mma maka ndị na-arụ ọrụ ogologo oge ma ọ bụ na-anọghị ọtụtụ ụbọchị. Ezigbo ụlọ na ndị mmadụ na-akpakọrịta n'oge niile n'ụbọchị ga-adabara adaba maka ụdị a iji belata ihe ize ndụ nke enweghị nkụda mmụọ na omume nkụda mmụọ kpatara nchegbu nkewa na nrụgide.
Omume ndị na-adịghị mma dị ka ogbugbo na-aga n'ihu, ma ọ bụ mkpu (nke bụ nke jikọrọ ya na Huskies ), abụghị àgwà jikọtara na nkịta a.
Otú ọ dị, a ga-atụ anya na ogbugbo, ma ọ bụ ọnụ, mgbe nkịta na-eto eto na-agafe agbapụ.
Ọ bụ ezie na nsogbu ndị a metụtara obere omume ga-eme tupu ntozu okè (yabụ tupu ọnwa 24) ebe ha malitere ịnwale oke ha.
The ọnọdụ nke a na nkịta emee maka ezigbo ihe niile , na akọrọ ọtụtụ igbe maka onye ọ bụla nwere nkịta mbụ ma ọ bụ ndị nwere ezinụlọ na-eto eto.
Ikike ha imeghari n'ọnọdụ dị iche iche, ma ọ bụ nke dị jụụ ma ọ bụ nke egwuri egwu, pụtara na ha dabara adaba ịnọnyere ndị bịara abịa, nkịta ọhụrụ, ụmụaka toro eto na ụmụaka.
Spaniel ọla edo edo edo bụ ihe na-arụsi ọrụ ike na ọgụgụ isi nke chọrọ mmega ahụ na mkpali dị ukwuu
Yabụ, ọ bụrụ na ha mere anụ ụlọ zuru oke, kedu ka ọ dị mfe iji lekọta Golden Cocker Retriever?
Ilekọta nkịta a ga-achọ ị nọrọ ogologo oge iji dozie nkịta gị , n'ihi uwe ogologo ha.
Ha ga-achọkwa mgbatị ahụ dị ukwuu, nyere ma ndị Retrievers na Cockers sitere na nzụlite egwuregwu na ume siri ike.
Kwesighi ịbụ onye nwe nkịta nwere ahụmahụ ka ọ dabara na ịnwe nkịta a n'ihi na ọ dị mfe ịzụ ha .
Nri Nri Kwa .bọchị
Nduzi Calori 1,000
Iko nke Kibble
Akọrọ kibble nri ugboro atọ n'ụbọchị bụ ezigbo nri maka Golden Cocker Retriever na otu nnukwu-ụdị kibble mgbe ụfọdụ achọrọ maka nnukwu mixes karịrị 60lb.
Feeddị mpịakọta nri a na - ahụkarị ga - adịgasị iche dabere nha nkịta (nke a na - anaghị ahụkarị ya na ha ịbụ obe).
N'ozuzu, ọ kachasị mma ịmara ibu ibu nke nkịta gị, yabụ ị nwere ike gbakọọ ọnụ ọgụgụ nri ha chọrọ.
Nkịta ọ bụla dị iche na nha, ụdị nri nkịta ọ bụla dịkwa iche na ntuziaka ha dabere na ọdịnaya nri ahụ.
Dịka, nkịta 40lb chọrọ n'etiti calorie 900-1,000 kwa ụbọchị nke kwesịrị ịnwe gburugburu 25% protein na 13% abụba.
Nchọpụta mmega kwa ụbọchị
Nkeji Nkeji 60
Ije ije kwesịrị ịdịru ihe dị ka nkeji 60 maka izipụ arụ ọrụ a. Nke a nwere ike ịbụ otu ije dị ogologo, ma ọ bụ ịnwere ike kewaa ha n'ime ụzọ abụọ dị mkpirikpi kwa ụbọchị.
Nta nke Golden Cocker Retriever dị obere bukwara na ha siri ike ngwangwa ma dịkwa mfe igwu kpọtara ma soro ụmụaka gbaa ọsọ.
N'ihi ọdịmma ha, ha bụkwa ndị ezigbo mmega ahụ (maka ụmụ mmadụ na nkịta ndị ọzọ) na-agba ọsọ n'enweghị nsogbu.
Ha trainability dị elu pụtara ncheta ha adịghị mma .
Dịka ụdị a nwere ọgụgụ isi, ha nwere ike irite uru na ụfọdụ ihe omumu ihe mgbochi ime ulo - nnukwu ọrụ maka ụmụaka na ndị okenye ka ha soro nkịta gị nwee ntụrụndụ na mmekọrịta mmekọrịta.
Maka Golden Cocker Retrievers karịsịa, otu ịgagharị kwa ụbọchị (ma ọ dịkarịa ala) chọrọ ka enweghi mmega ahụ nwere ike ibute hyperactivity.
Onye na-agba agba ọla edo na-enwekarị uwe mkpuchi ọla edo mana ọ nwekwara ike ịbụ agwakọta nke agba na agba dị iche iche.
Na ọgụgụ isi na ịnụ ọkụ n'obi ime, si ma Spaniel na Retriever, mee maka nkịta nke na-erube isi ma mfe ịzụ .
A na-eji ọtụtụ Retrievers na Spaniels eme nkịta na-arụ ọrụ:
Iduzi ndị ìsì ma ọ bụ ndị ntị ike
Nkịta nchọpụta maka ngalaba ndị uwe ojii
Dị ka ọtụtụ ụmụ nkịta, nkịta a nwere oge mmekọrịta mmekọrịta site na 6 ruo izu 16. Oge ọnwa 2 a dị oke mkpa n'ịkpughe nwa nkịta dị iche iche na nkịta dị iche iche, ndị bịara abịa, ụmụaka nke afọ niile na ahụmịhe dị iche iche.
Site na-enwe ọtụtụ ọnọdụ dị iche iche, nwa nkita ahụ ekwesịghị ịtụ ụjọ ma na-atụ ụjọ n'oge nzukọ ọhụụ na ọnọdụ ọhụụ.
Nke a dị mkpa karịsịa maka mmepe nkịta enyi na enyi.
Golden Cocker Retriever bụ onye nwere ọgụgụ isi ya mere puzzle feeders na ndị ọzọ ụbụrụ egwuregwu n'ihi na nkịta ga-ume cognitive akpali ma gbochie ahuokika.
Isi ọgụgụ isi ha pụtara na ha nwere ọzụzụ dị ukwuu maka ọrụ ndị dị mgbagwoju anya dịka nrubeisi n'ime ezinụlọ.
Nkwado dị mma (iji nri ma ọ bụ ụgwọ ọrụ nke egwuri egwu) na-adị irè mgbe ị na-azụ nkịta a.
Enwere ụfọdụ nsogbu ahụike nke ọ dị mwute ikwu na ọ bụkarị na Cocker Spaniel Golden Retriever mix, ndị a bụ nke kachasị ketara n'aka nne na nna ha dị ọcha:
Ọdịiche na-adịghị mma nke hips (ya bụ Hip dysplasia) nke na-eduga na ọrịa ogbu na nkwonkwo na-egbu mgbu.
Ọkpụkpụ anya, nke a ga-eketa n'aka nne ma ọ bụ nna, kpatara ọrịa, ma ọ bụ nsonaazụ nke agadi nwere ike ibute igwe ojii nke anya nkịta gị. Nke a anaghị egbu egbu ma nwee ike ịwa ahụ iji wepụ cataracts ma gbochie ikpu ìsì.
Hypothyroidism nke bụ agbada mmepụta nke hormone thyroid , na-eduga na uwe na-agwụ ike na nke na-adịghị njọ, uru bara ụba ma belata ọrụ.
Atrophy retinal na-aga n’ihu nke na-abụ nshịlata nke retina nke na - eduga n’ọchịchị.
A Golden Cocker Retriever ga-ntakịrị karịa onye a na-ahụkarị Golden retriever, na-emekarị itu gburugburu 30-45 pound na tụrụ ya n'etiti 14-24 sentimita asatọ.
Nwere ike na-atụ anya na nkịta dị nkenke, nke dị ntakịrị karịa nke ọla edo ma buru ibu karịa Cocker nwere uwe ogologo, nke na-enweghị ntụpọ, ntị floppy na isi nke buru ibu karịa ndị Spaniels.
A na-ahụkarị ụdị ọkara a na agba nne na nna ha Otú ọ dị, ọ bụrụ na nne na nna cocker spaniel bụ nwa, aja aja, ọcha ma ọ bụ jikota , nke a nwere ike ịfefere ụmụ ya oge ụfọdụ.
Uwe ha na-adịkarị ogologo-larịị ma dịkwa mma maka ụfọdụ fringes n'akụkụ ụkwụ, ntị na afọ. Ntughari a ga - acho ichikota ubochi kwa ubochi site na iji ogwu di nma iji gbochie nkpuchi.
Pufọdụ ụmụ nkịta na-eketa ọtụtụ mkpụrụ ndụ ihe nketa site na Golden ma ya mere ha nwere akwa nwere okpukpu abụọ, n'ọnọdụ nke a, ajị anụ ahụ nwere ike ịba ụba ma chọọ nhazi nke ọma.
Ndị na-ewe ọla kọpa ọla edo nwere ike ịme anụ ụlọ zuru oke.
Uwe ha kwesiri ka edozi ha (mana ajughi ha). Ikwesiri ime ka nkịta gị bie iji hụ na edozi edozi kwa ọnwa 3 ma ọ bụ 4.
N'ihi ajị ha dị ogologo, nke nwere ike ịdị mfe ịlụ ọgụ na mpaghara ụfọdụ, nkịta a chọrọ ọtụtụ edozi.
Obe a ga-achọ ka ị na-ehicha oge niile n'izu ọ dịkarịa ala iji hụ na uwe dị mma.
Ọ bụrụ na ha ketara eketa ihe ndị ọzọ Retriever, na akwa mkpuchi, mgbe ahụ, nwoke na-alụ nwanyị zuru oke nke nwere slicker brush otu ugboro n'izu nwekwara ike ịbụ ihe kwesịrị ekwesị. Mat na mpaghara nwere mmetụta dị ka akụkụ ahụ, ukwu na afọ ka enwere ike ịbelata iji zere imebi nkịta.
Okpukpo a kwesiri maka otutu ebe obibi, ma obu di na nwunye, onye nwe novice ma obu ezinulo nwere umuaka.
Lovinghụnanya ha na itinye ọrụ na-arụ ọrụ pụtara na ha na-etolite mgbakwunye siri ike n’ebe ndị na-elekọta ha nọ, na-eme ka ha ghara ịdị mma maka ndị na-arụ ọrụ ọtụtụ awa.
Ha chọrọ mmega ahụ kwesịrị ekwesị, ma ọ bụ ịga ije, ịgba ọsọ, igwu mmiri ma ọ bụ igwu egwu na nkịta ndị ọzọ.
Isi ọgụgụ isi ha pụtara na ha na-eme nke ọma site na mmekọrịta mmadụ na ibe ha na mkpali nke uche nke ahụmịhe ọhụụ (ma ọ bụrụhaala na ha abụrụla nke ọma dịka nwa nkịta).
Dika ha choro otutu ndi mmadu, ndi mmadu a na-achoghi dika ndi nkita di elu, ma na acho nkita a nwere ike inwe obi uto.
Ka anyị mara ihe ị na-eche banyere Golden Cocker Retriever na ihe ndị dị n'okpuru!
Aha nkịta Irish na Pụtara: Aha 200+ sitere na Éire
Bichon Poodle: Mara ezigbo nkịta egwuregwu egwuregwu
HọRọ A Ghara
White Dog Guide Dog: Ahịa, Puppies, Agba dị iche iche & ọdịdị
Nzụkọta, helna-elekọta Aka, na Rekụkọ puppy
Top 37 Poodle Mixes: A-Z Poodle Mix ụdị Nri
The Perro de Presa Canario: Nke a bụ ezigbo nkịta ezinụlọ?
Isi Ojiji: Black Mouth Cur
Ozi Bulldog nke French Ozi: Ihe 13 Mere Anyị Ji Hụ Ha n'Anya!
Golden Retriever vs Labrador: Esemokwu 10 I Kwesịrị Knowmara
Inghọrọ ụdị nkịta
Kedu ihe bụ oge ndụ Golden Retriever?
Golden Cocker Retriever: Bụ 'Ruo Mgbe Ebighị Ebi' nwa n'ezie?
Popular Udiri Anumanu
kedu ihe ogologo ntutu chihuahua dị
nkezi ọnụ ụmụ nkịta French bulldog
lee ka nkịta m ga -esi buru ibu
ole ụra nwa nkita chọrọ
ka nkịta na -ekwe iri anyụ
Dịrị Reeddịrị Nkịta Ajụjụ Nkịta Ahụike Ngwa Nkịta Ọzụzụ Nkịta Apụta Aha Nkịta Ahụike Ọzụzụ Nkịta, Gosipụtara
© 2021 | Ikike Niile Echekwabara